हनिमुन गएकी प्रियंकाको समुद्रमा बिकिनीमा मस्ती, निकले शेयर गरे पिङ खेलेको भिडियो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
हनिमुन गएकी प्रियंकाको समुद्रमा बिकिनीमा मस्ती, निकले शेयर गरे पिङ खेलेको भिडियो
मुम्बइ। बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा अहिले पति निक जोनससँग क्यारेबियन आइल्याण्डमा हनिमुन मनाइरहेकी छिन् । शुक्रबार प्रियंकाले इन्स्टाग्राममा एउटा भिडियो शेयर गरेकी छिन् जुन भिडियो निकले खिचेका हुन् । निकले खिचेको यो भिडियोमा प्रियंका बिकिनीमा समुद्र किनारमा पिङ खेलिरहेकी छिन् । यो भिडियो इन्स्टाग्राममा निकै लोकप्रिय भइरहेको छ ।
प्रियंका निकले जोधपुरको उम्मेद भवनमा विवाह गरेका हुन् । उनीहरुले डिसेम्बरको सुरुवातमा हिन्दू र क्रिस्चियन दुवै विधिअनुसार विवाह गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरुले मुम्बइ र दिल्लीमा रिसेप्सन दिएका थिए । उनीहरुले अब लस एन्जल्समा पनि रिसेप्सन दिँदैछन् । हेर्नुहोस् हनिमुनको भिडियो –